SARY: Tetikasa “Inside Out” Ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Ian McKenzie
Voadika ny 21 Mey 2013 4:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Italiano, 日本語
Anisan'ny tetikasa “Inside Out” tontosain'ilay mpanakanto Frantsay JR ity kamiao ity, tetikasa andraisan'ny rehetra anjara. Mifantoka amin'ny fakàna sary ireo olona eny an-dalana manerana ny faritra maro isan-karazany eran'izao tontolo izao ny tetikasan'ity mpanakanto ity, ary hametaka izany sary izany eny amin'ny tranobe an-tanàn-dehibe. Sehatra misokatra ho an'ny rehetra ny tetikasa mba hizarana ireo tantara tsy fantatra sy hamadika ny fitantarana manokana ataon'ny tena ho haikantom-bahoaka.
Sary ahitana olona eo amin'ny 400 eo no voangona avy tao amin'ny faritra Tohoku, avaratr'i Japana, faritra izay mbola mizaka ny voka-dratsin'ny fihovitry ny tany sy ny tsunami tamin'ny taona 2011 izay namoizana ain'olona teo amin'ny 16.000 ary nandravarava ny faritra. Natao fampiratiana ny sombiny tamin'ireo sary ireo.
Nanomboka tamin'ny volana Febroary 2013 ary mbola mitohy hatramin'ny 2 Jiona 2013 ny Fampiratiana JR ao amin'ny Mozean'ny Kanto Ankehitriny Watari ao amin'ny distrikan'i Shibuya, ao Tokyo. Satria tao Tohoku no natao ny Tetikasa “Inside Out” JR, mitady fanohanana ara-bola ho an'ny tetikasa amin'ny alalan'ny Campfire[ja], habaka Japoney fanangonam-bola ny Mozean'ny Kanto Ankehitriny. Nahazo valiny mahafa-po ity antso fanohanana ity, satria tratra tao anatin'ny fe-potoana napetraka ny vola notadiavina, roa tapitrisa yen (eo amin'ny 19.600 dolara Etazonia eo).
Iray amin'ireo habaka fanangonam-bola ifandrimbonana ao Japana [ja] ny Campfire. Tamin'ny 2012, naangona [ja] vola teo amin'ny 92 tapitrika yen (903.000 dolara Etazonia) ny habaka ho fanohanana ny tetikasa; ary amin'ny alalan'ny famatsiam-bola 5.3 tapitrisa yen (52.000 dolaras) ho anà tetikasa manokana. Mampitaha ity habaka ity amin'ilay habaka fanangonam-bola ifandrimbonana malaza Amerikana Kickstarter, izay nahavita naangona vola iray tapitrisa dolara ho an'ireo tetikasa 17 samihafa ary vola mitotaly 320 tapitrisa dolara eo tamin'ny taona 2012.
Na dia eo aza ny hakelin'ny tsenan'ny fanangonam-bola ao Japana, afaka nihoatra ny fanambiny ny Campfire ary nahatratra ny tanjona. Manao antso fanohanana ara-bola ao amin'ny Campfire [ja] ny Mozean'i Watari ankehitriny mba hanitarana ny tetikasa manerana ny firenena. [Efa nikatona tamin'ny 10 Mey 2013 teo izany tetikasa fanangonam-bola izany]
JR niresaka momba ny hevitra ambadiky ny tetikasa nandritra ny resadresaka an-tserasera tao amin'ny tranokalam-baovao Blouin Artinfo:
Tao amin'ny Twitter, TAKEI Toshifumi (@toshify) niresaka ny fihetseham-pony momba ilay fampiratiana:
@toshify: Nandeha nitsidika ny Fampiratian'i JR “Afaka Manova Izao Tontolo Izao Ve Ny Hainkanto?” (izay tontosaina ao amin'ny Mozea Watari hatramin'ny 2 Jiona) aho.
@Hiro183: (Fanin-13) amin'ny fitsidihako ny fampiratiana JR ao amin'ny Mozea Watari ity. Nahoana no tonga mitsidika karazana hetsika tahaka izao aho? Satria nandray anjara tamin'ny tetikasa aho tamin'ny alalan'ny fanohanana ara-bola tao amin'ny Campfire. Manome lanjan'ny haikanto ny fandraisantsika anjara amin'izany.
@hiswii: やっぱワタリウムのJR展、行って 撮るだけで参加したって言いづらいよなー。
@hiswii : Sarotra ho ahy ny hiteny fa nandray anjara tamin'ny fampiratiana JR tao amin'ny Mozea Watari aho tamin'ny fankanesako tany ary nalaina sary. Tsy ampy fitaovana ny tetikasa JR ary tokony homena fitaovana fanampiny.
Azo jerena eto ireo sary maro hafa tamin'ny tetikasa Tohoku. Afaka jerena eto kosa ireo sary tamin'ny fampiratiana tao amin'ny Mozea Watari.
Navoakan'ny Mozea Watari [ja] avokoa ireo sary rehetra hita ao amin'ity lahatsoratra ity. Navoaka araka ny fepetra takian'ny torolalan'ny fizaka-manan'ny Campfire amin'ny teny Japoney, ka hahafahan'ireo mpikambana ao amin'ny Campfire handefa indray ireo sary/lahatsoratra.